အလာ A cat ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Science & Religion » အလာ A cat ပါ	6
အလာ A cat ပါ
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 5, 2016 in Science & Religion |6comments
အို… ယာကွတ် လျှာပွတ် မာမွတ်သခင် ဂဇက်သဂျီး အလျှာတိုလာ ခိုမ်မေနီ အမျိုးအပေါင်းတို့… ဇူလိုင်လ ၇ရက် ဗုဒ်ဓဟူးနေ့သည်ကား ဥပုသ်သီတင်း သီလဆောက်တည်ခြင်း လွန်မြောက်သည့် ပထမဦးနေ့ အားလာဘ်ရက် အခါသမယတည်း။ တနည်းဆိုသော်ဇူလိုင်၆ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့တွင် ဥပုသ်တည်ခြင်း ပြီးမြောက်ပေ၏ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဇူလိုင်၅ရက် တနင်္လာည၌ မြင့်မြတ်သော လခြမ်းကွေး အဆင်းသဏ္ဍန်အား ဆော်ဒီ၊ ကာတာ နှင့် ယူအေအီး နိုင်ငံများရှိ မူလာအရှင်ကြီးများ မြင်ခြင်းအလို့ငှာ အလာရှင်မြတ် ခွင့်ပြုတော်မူခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုရက်မတိုင်မှီ သင်တို့ဆိတ်ကို ခါးဝတ်ပုဆိုး၊ ဘောင်းဘီဇစ်ကြိုးကဲ့သို့ လုံခြုံတင်းရင်းစွာ ထိန်းသိမ်းကြပေလော့။။ သင်တို့အား အလာရှင်မြတ် မွေးမြူနှစ်သက် ခြစ်ခင်သနားပါစေ။။
Eid al-Fitr: Saudi, Qatari and Emirati Officials Declare Wednesday as 1st Day of Islamic Holiday
The announcement was made Monday after authorities failed to see the crescent moon that marks the start of the three-day festival. The starting date varies according to each country’s location.
ဂဇက်ရွာသဂျီး/ဗလီဆရာ အလျှာတိုလာ မာမွတ်ခိုမ်၏သာမှတ် အလျှာရှည်လာ မူလာကြောင်ကြီး ၇၈၆၀
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သူရို့ ဘာသာရေးမှာ ကောင်းကွက်တစ်ခုက သတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းအမှုမှာ ကုသိုလ် ငါယူ အကုသိုလ် နင်ယူ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက် အတွေးထက် အသတ်ခံရတဲ့ သတ္တ၀ါအပေါ်မှာ စိတ်ကလေး ထားလိုက်တာ။ ဘယ်လို အသက်ညှာဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စ။ သတ္တ၀ါကို လည်ပင်းသွေးကြောလေး ဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ၀က်သတ်တာမြင်ဖူးလား။ ဘယ်ဘာသာဝင်တွေကို အရက်စက် အကြမ်းကြုတ်ဆုံးလို့ ကမ္ဘာက ယူဆထားသလဲ သိလား ကကြောင်။
Thint Aye Yeik says: ဝက်ကို နယ်မှာတုန်းက ကိုယ်တိုင် ဝင်သတ်ဖူးတယ်။
ဝက်သတ်တဲ့အဖွဲ့ထဲ ပါဖူးတာပေါ့။ အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် ရှေ့လက်ပြင်နဲ့တစ်ထွာအကွာလောက် နေရာကို ဓါးချွန်လေးနဲ့ ဇွပ်ခနဲတစ်ချက်ထိုးရုံပဲ။
ချက်ကောင်း။ လွဲရင်တော့ အဲ့ဝက်က ဒဏ်ရာတစ်ချက်နဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း ပြေးနေလေရော
kai says: အရက်စက်ဆုံးက.. လူပြိုကြီးတွေပဲ..။
လူဖြစ်မယ့် စပန်းတွေကို.. အလဟဿဖျက်ဆီးပစ်နေတာလေ…။
ကိုယ့်သွေးသားတွေကို.. တခါတခါ မာစတာဘိတ် လုပ်ရင်.. အကောင်သန်း၅၀၀လောက် သတ်ပစ်နေတဲ့သဘော…လို့.. သိစေချင်.. မှတ်ချက်။ ။ ပါဏာတိပါတာ အရွတ်သမားများမပါ..။ Male Biological Clock – Dr. Harry Fisch
The average amount (volume) of semen expelled byahealthy man in one … in that teaspoon are usually roughly 250 million sperm, the tadpole-like cells that
ဂျစ်စူ says: ဂျပိုး ကို လိပ်ဖြစ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့ သဂျီးရာ
သန်းငါးရာ အမွှာပူး မွေးတာလဲ မကြားမိပါဘူး
တခါဆက်ဆံ တခါခလေး မွေးတယ် ဆိုတာလဲ မရှိပါဘူး
ဘလိုအိပ်အိပ် တနှစ်မှ တယောက် နှစ်ယောက်ပဲ မွေးတာဘာ
တနှစ် မှာ ၃၆၅ ရက်ထား
တရက် မှာ တကြိမ် အိပ်တယ်ထား
တစ်နှစ်မှာ သန်း ၁၈၂ ၅၀၀ ရှိတယ်
မွေးတော့ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်တာတွေ
ခါတလေမှ ….. ဆိုတော့…..
kai says: သယ်…။ မိုက်ဂျစ်စူ…။
လူပြိုကြီးတွေကသာ.. သေကြေပျက်စီးမှာသိသိနဲ့.. ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်စီးကြတာ…။
မနောကံနဲ့. .ဘယ်သူမ, တွေကို..ဘယ်လောက် ကာမေသုကံတွေ ကျူးနေမှန်းလည်းမသိ…ရ… သေး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ဂျစ်စူ says: အပ္ပနားခိုင်တို့ က ဒါမျိုးကျ မေတ္တာကြီးပြပြီး
လူလူဂျင်း အပြုံလိုက် အစုလိုက်
အသေခံဗုံးခွဲ လေယာဉ်စီးလုံး စင်တာတခုလုံး
အပ္ပနားခိုင်ဒို့က ထစ်ခနဲရှိ ဘာသာရေးပဲ
အပ္ပနား တချောင်းထိုး အပ္ပနားကိုလဲ ပြန်ထိုးမယ် လက်ညှိုး